🥇 ▷ Khadka Telefishanka Dabka ee 'Amazon Fire TV Cube,' Dabka TV-ga Dabka 'Cod-ka, TV-yada ayaa laga furay IFA 2019 ✅
Khadka Telefishanka Dabka ee ‘Amazon Fire TV Cube,’ Dabka TV-ga Dabka ‘Cod-ka, TV-yada ayaa laga furay IFA 2019
IFA 2019 ee Berlin khamiista, Amazon ayaa soo bandhigtay qaybo badan oo ka mid ah alaabada TV-ga Dabka oo loogu talagalay suuqa Yurub. Waxyaabaha la soo saaray waxaa ka mid ah ‘Amazon Fire TV Cube’ oo dhan-cusub, iyo sidoo kale marti-sharaf telefishanno caqli badan oo qayb ka ah safka ‘Dabka TV Edition’. Waxa kale oo jira tiro ka mid ah badeecado maqal ah oo leh TV-ga ku dhismay Dabka TV-ga oo leh xakamaynta codka Alexa.
Dabka TV Cube
Marka ugu horeysa waa “Cilmiga TV-ga Dabka 2-gen ee dabka oo la yimaadda processor-ka hexa-core oo bixiya 4K Ultra HD waxyaabaha ku jira illaa 60 fps. Waxa intaas ka sii badan, waxa kale oo ay la timaadaa taageero Alexa si aad u ciyaarto, u joojiso una baadho waxyaabaha ku jira amarada codka. Waxaa lagu qiimeeyaa $ 119.99 (qiyaastii Rs. 8,500) waxaana loo heli karaa pre -order ee Mareykanka, Canada, Boqortooyada Ingiriiska, Jarmalka iyo Japan.
Daabacaadda Dabka TV
Amazon ayaa sidoo kale ku biireysa tiro ka mid ah iibiyaasha elektiroonigga ah iyo alaabada tafaariiqda ah ee Yurub si ay u bilaabaan aaladda dambe ee aaladda TV-ga Dabka ee Boqortooyada Ingiriiska, Jarmalka iyo Austria. Shirkadda ayaa khamiista soo saartay 15 waxyaabo cusub oo ah Dabka TV-ga Dabka, oo ay ku jiraan waxa ay shirkaddu ku tilmaamtay inuu yahay TV-ga ugu horreeyay ee Fire TV Edition smart TV oo ay ku dhexjirto kantaroolka codka fog-fog. Waxay kaloo soo saartay ‘TV’ OLED Fire TV Edition smart TV iyo sanqadha ugu horreeya ee weligeed ah ee TV-ga.
Xaaladda aadan horey u aqoon, telefishanada casriga ah ee loo yaqaan ‘Fire TV Edition’ ayaa aasaasi u ah telefishanno soo-saareyaasha dhinac saddexaad ah oo la yimid waayo-aragnimo buuxda oo Amazon ah, oo ay kujirto kaaliyaha codka codka ee Alexa. Shirkadda waxay xiriir la sameysay Toshiba, Skyworth, Arcelik, TPV, Compal iyo kuwa kale si ay TV-yada smart smart TV ugu keenaan macaamiisha ku sugan Boqortooyada Ingiriiska, Jarmalka iyo Austria.
Dabka TV Edition Dabka TV
Marka laga soo tago telefishanka, Amazon sannadkan waxay sidoo kale soo bandhigtay muuqaalkeedii ugu horreeyay ee Dabka TV-ga Dabka iyadoo lala kaashanayo Anker. Waxaa loogu yeeray ‘Nebula Soundbar – Dabka TV-ga Dabka’, aaladda waxay la timid mideysan telefishanka caqliga leh ee mideysan ee telefishanka smart, xakameynta codka codka ee agagaarka Alexa iyo Dolby Vision, sida laga soo xigtay Amazon. Aaladda ayaa laga bilaabay Mareykanka, Canada, Boqortooyada Ingiriiska iyo Jarmalka.
Qiimayaasha Qalabka TV-ga Dabka wuxuu ka bilaabmayaa $ 599 kaliya Toshiba 65-inch 4K Ultra HD Smart LED TV HDR, halka Nebula Soundbar uu diyaar u yahay amar-bixinta maanta oo ah $ 229,9 Mareykanka.